Idu Nduzi na Idu Asambodo Software
Anọ m na-agbalị ịchọta ndị enyi m na Right Na mmekọrịta ọnwa ole na ole ugbu a… e nwere ntamu gburugburu ụlọ ọrụ na ha na-adịbeghị anya n'elu ikpo okwu nkwalite ndị ịtụnanya. Andy Skirvin kwụsịrị ọfịs ahụ wee gafere n'elu ikpo okwu ma ọ gbapụrụ m kpamkpam.
N'ihi na ogologo oge ka m nwere ike icheta, M na a na-ekwusa na-elekọta mmadụ media bụ ihe ampilifaya n'ihi na gị ahịa… na ọ ga-webata a multi-ọwa atụmatụ ka n'ụzọ zuru ezu leverage ya. Right On Interactive ewulitelarị ikpo okwu dị ịtụnanya nke na-eji data dị egwu nke mgbasa ozi mmekọrịta na-enye, na-enye gị ohere ịlele atụmanya na ya, ma na-enye gị usoro dị mfe maka nkewa na ịkparịta ụka akpaaka na atụmanya akọwapụtara maka ọkwa ịzụ ha nọ.
Mgbakwunye mmekọrịta gị na ụlọ ọrụ gị nwere ike ịbụ njikọ na-efu efu ị chọrọ iji tọọ atụmanya na ebe ha nọ n'ịzụ ahịa. Ikekwe ha gara na saịtị gị… mana ha adịghị njikere ịzụta ma. Mgbasa mgbasa ozi, ndebanye aha na email na-enye ụzọ maka atụmanya ịnọ na kọntaktị ruo mgbe ha dị njikere ịzụta.
Site na ịlele omume ha… na-eso, amasị, tweets, retweets, nlele-ins ins mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike inyere aka mee ka atụmanya ahụ gaa nzọụkwụ ọzọ na usoro ịzụ ahịa. Ikike ị nye ụzọ na ịkwaga atụmanya site na nzụlite ọ bụla na-eme ka ọnụọgụ ndị ruru eru na-ebute ndị ahịa gị. Right On mmekọrịta mmekọrịta nwere okpukpu anọ karịa ụzọ ha ruru eru iji ha ahịa sọftụwia na-ebi ndụ.
Ihe isi ike, n'ezie, na-achịkọta ma na-atụle ọdịnaya niile ahụ! Right On Interactive mere nke a na ntanetị nke na-enye ụlọ ọrụ gị ohere iji ọrụ gị dị CRM (ntụgharị. Salesforce) na ESP (ntụgharị. ExactTarget). A na-etinye data gị batrị, gbanye ya, ma kpatara mkpọsa na-akpaghị aka site na sistemụ ha.
Aka nri Na mmekọrịta mmekọrịta
Right on Interactive's Campaign na Usoro mmezu
Imirikiti ụlọ ọrụ anaghị enwe ihe ndị dị mkpa iji zụlite ma kpalie ndị ahịa site na pipeline ahịa ha… ya mere na ọnụọgụ ego nke onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye na-ere ahịa, ikpo okwu na-eme ka uche zuru oke.
Kọwaa ọkwa na usoro ụzọ maka usoro ndụ ndị ahịa gị.
Mee ka otutu "silos" di ike n'ime nchekwa data ahia.
Zụlite usoro maka ịzụ ahịa iji zụlite ndị na-eduga ya na ndị ahịa ya.
Nye ibu na ụkpụrụ maka profaịlụ na njikọ aka.
Dezie mmemme ahia, mkpọsa na ụzọ aghụghọ dabere na "ebe ha nọ na mmekọrịta".
Gafee metrik dị nro ma tụọ ROI.
Tinye usoro mgbasa ozi mmekọrịta iji mechie akaghị.
Right Na mmekọrịta nyekwara ihe atụ ndị ahịa na ọgbakọ Mmekọ kacha nso nso a: